C/raxmaan C/shakuur “Dowladda Qatar waxay la soo baxday habdhaqankii hore ee Itoobiya” – Banaadir weyne
C/raxmaan C/shakuur “Dowladda Qatar waxay la soo baxday habdhaqankii hore ee Itoobiya”
Siyaasiga mucaaradka ah C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ugu baaqay dowladda Qatar inay ka joojiso faragelinta qaawan ee ay ku heyso Soomaaliya.
Qoraal uu ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in Qatar ay la soo baxday hab dhaqankii lagu yaqiinay dowladda Itoobiya.
“Dowladda Qatar waxay la soo baxday habdhaqankii hore ee Itoobiya, safiirkeeduna sidii Generaal Gabre oo kale ayaa saf dheer loogu jiraa, shakhsiyaad tabcanayaal ahna way nagu dhex tallaasheen”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
C/raxmaan C/shakuur ayaa is weydiiyay sababta looga aamusan yahay Qatar, haddii shalay Itoobiya siyaasiyiintii saaxibka la ahaa lagu tilmaami jiray inay daba dhilif yihiin.
“Soomaaliyey haddii aan shalay dhibsannay sandulleyska saraakiisha Itoobiya, siyaasiyiintii saaxiibka la ahaana daba dhilif Itoobiya ku suntannay, maxaan Qatar uga aamusannahay, Qatar ma waxaa looga aamusan yahay xoogaaga sandareertada ah ee xaggeeda ka yimaada”ayuu yiri Mr C/raxmaan C/shakuur.
“Waxaan dawlada Qatar ugu baaqaynaa in ay joojiso fara gelinta qaawan ee ay arrimaha Soomaaliya ku hayso, kana waantowdo habdhaqan taban ee ay horey dowlado kale ugu hoogeen” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay.
Dowladda Qatar ayaa ah taageeraha ugu weyn ee dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, waxaa la sheegaa inay horay u taageertay ololihiisa doorasho, waxaana labadii sano ee la soo dhaafay si joogto ah taageero hiil iyo hooba u siineyso dowladda Fedetaalka. – Jowhar News